Noocyada nigisyada - Qalabka ugu fiican ragga | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Dhameystirka, nololeedka, fashion
Dharka hoose waa dharkaas nin waliba adeegsado, Had iyo jeer waxaa lagu qeexaa inay yihiin nigis, oo ka qarsoon indhaheenna taasina waxay qeexaysaa shakhsiyadda ninka xidhan. Qaabka uu qofku xiran karo had iyo jeer wuxuu qeexayaa inuu yahay nin raaxo leh, taxaddar la'aan, nin wax ku ool ah ama wuxuu jecel yahay inuu ku raaxeysto muuqaalkiisa shakhsiga ah.
Si dhab ah looma oga cidda iska leh feeryahannadii ugu horreeyay, laakiin waan ognahay inay Tutankhamun adeegsadeen, sida hadhaagii qadiimiga ah ay tusayso. Shukaansi kale oo aan kuu hayno waa waqtiyadii Roomaanka markii dadka degganaa waxay soo xirteen nooc xafaayad ah oo la yiraahdo subligaculum Kuwaas oo iyaga ku hoos guntaday khamiisyadooda. Sidan ayaan ku xasuusan karnaa sawirrada gladiators oo leh dharka noocan ah ka hor intaan dagaal la gelin.
Ilaa maanta waxay ku xuubsiibteen taariikhda, waxay ahaayeen kuwo horumarsan oo u janjeedha sidii qarniyo ka hor u dhaafay. Isticmaalkeedu wuxuu uga hor yimid sidii dhar isku dhow, laakiin had iyo jeer sidii loogu isticmaalo ragga ka badan dumarka.
Nidaamka dharka noocan ah marwalba wuxuu ku bilaabmay u isticmaal linen cad sida shey soo saarkeeda. Waxay caado u ahayd in la isticmaalo agabkan oo lagu nadiifiyo cabir nadaafadeed oo adag, halkaasoo biyo kulul loogu adeegsaday nadaafadda dharka.
1 Noocyada kooban
1.1 Gawaarida feerka
1.2 Dharka hoose
1.5 Kala goyn
2 Maxay yihiin dharka hoose ee fiican?
Dharka noocan ah waxay leeyihiin sababo loogu yeero taas waana taas wuxuu ka yimid erayga feeryahan. Waa nooca ugu caansan ee kooban iyo waxay u taagan tahay qaabkeeda surwaalka gaaban taas oo gunaanadkeedu uusan inta badan gaarin jilbaha.
Intooda badan la imow furitaan yar oo loo yaqaan Daqsi si xubinta taranka looga soo saaro iyada oo aan hoos loo dhigin qoraalka ama aan laga bixin wax dhar ah. Waxa ugu caadiga ah waa taas furitaanka noocan ah waxaa isku daboolay hal maro oo kale, laakiin noocyada qaar ayaa sharad ku dhigaya badhamada, velcro ama nooc ka mid ah xiritaanka xaaladaha qaarkood.
Feeryahan dabacsan Waa mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan ee la yaqaan, waa mid dabacsan oo ballaadhan oo halabuurkiisu inta badan ka samaysan yahay cudbi. Way ku habboon tahay in lagu xidho surwaal dabacsan.
Jirridda feerka, waa mid kooban oo leh astaamo hore oo isku mid ah laakiin la hagaajiyay. Waxaa laga yaabaa inuu yahay nooca ay adeegsadaan dhammaan noocyada noocyadu hubaalna dadku waxay u maleynayaan inay tahay feeryahankii caadiga ahaa, laakiin noocaan waxaa loo yaqaannaa turbid. Hubso taas Waa nooc ka mid ah kuwa ugu caansan ee ay xayaysiiyaan dadka caanka ah ee murqaha leh. In ka badan hal olole xayeysiis ah ayaa jira, maxaa yeelay shaki la'aan waxay aad u jecel yihiin iyaga. Waxaan caadi ahaan ka heli karnaa Feer-yahanka Caanka ah ee caadiga ah ee dhexdaas cidhiidhiga ah leh band weyn oo laastik ah oo ku dheggan.
Feedhyahan kooban Waa isugeynta labada warbixin ee hore. Kuma ekaato mid ciriiri ah ama dabacsan oo waxaa lagu gartaa inuu xoogaa ka ballaaran yahay miskaha.
Waxay u egtahay qoraalkii hore ee qarniyadii hore, markay ragga door bidaan inay xirtaan saraawiisha noocan ah si ay uga difaacaan aaggooda taranka dharka dhaqanka. Haddii weli la adeegsanayo waxaa iska cad in Waxaa loo sameeyay raggaas oo dhan ee jecel inay kululaadaan, Maaddaama loogu talagalay inay labbisto dhexda ilaa cagaha. Dharkoodu badanaa waa suuf, ama suuf-polyester ama isku dhafka flannelka. Qaarkood xitaa waa kuleyl leh iskudhaf illaa labo dhar ah.
Dharkan wuxuu leeyahay dhammaan astaamaha kooban ee kooban hadduusan ahaan lahayn qeybta dambe ee ku saleysan laba xarig. Fariimahan waxay ku wareegayaan gadaal dhan bidix ilaa midig iyo kor ilaa hoose iyagoo soo bandhigaya gadaal oo dhan. Waxaa loogu talagalay inay si adag u ilaaliyaan xubinta taranka maxaa yeelay waxaa loo isticmaalaa waxqabadyo leh dhaqdhaqaaq weyn sida cayaaraha.
Caadi ma ahan in la arko nin qaba dharka noocaan ah. Haddii qaabkani jiro sababtu waa ragga qaar waxay doorbidaan inay xidhaan maxaa yeelay calaamadaha dhabarka dharkooda ugama tagaan. Waa arrin dhaqammo waana arrin raaxo leh in la xidho, maaddaama qaarkood u adkaysan kari waayaan inay xidhaan dharkan oo dhabarka ku dheggan.
Waa nooca gaagaaban ee feeryahan adag ama ku dhowaad adag, oo aan lahayn lugaha lugaha, kaas oo si adag u haya qaybta taranka isla markaana ku habboon gebi ahaanba jirka oo dhan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa dadka wax ku oolka ah, ciyaartooyda, kuwaas oo jecel inay dareemaan raaxo leh wax aan u maqnayn iyo wax aan aad ugu habboonayn jirkooda.
Maxay yihiin dharka hoose ee fiican?
Shaki la'aan furaha ayaa kujira raaxada ay dharkan ku siin karto, inaad u maleynayso inay tahay maqaarkaagii labaad. Waayo, waa in laga sameeyaa agab raaxo leh sida suuf jilicsan oo dabiici ah, microfiber tayo leh ama polyamide iyo elastane. Naqshadeynta sidoo kale waa inay noqotaa mid muhiim ah maxaa yeelay aad ayey ugafiican tahay inaysan haysan nooc tolmo ah oo suurta gal ah muranka dhibta badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Noocyada kooban